Home Wararka Ciidamada DF oo soo bandhigay hub ay furteen.
Ciidamada DF oo soo bandhigay hub ay furteen.
Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan Qeybta 21-aad iyo kuwa daraawiishta Galmudug ayaa guulo ka sheegtay dagaal ay la galeen Al-Shabaab, oo ay kusoo furteen hub.
Ciidamada Xoogga dalka saraakiisha hogaamineysa ayaa sheegay iney dagaal ku dileen Horjooge ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, sidoo kale ay kasoo furteen Saanad ciidan.
Waxaana sidookale ay warbaahinta u xaqiijiyeen Saraakiisha Daraawiishta Galmudug inay Al-Shabaab kala wareegeen Fariisimo ay ku sugnaayen.